musha > chitima kufamba Mazano > Where To Kupemberera Chinese New Year In Europe
Chinese Year New, anonziwo chitubu Festival kana kweGore Idzva, ndicho chinokosha karenda. Chiri rinokosha kuchiratidzwa mhuri kuungana, chikafu tsika, zvipiriso mutemberi, uye – ehe saizvozvo – mafayawekisi. Pane kuti Kupemberera Chinese New Year mu Europe chaiwo. Hazvina rakasiyana mukana kuita chekare Chinese tsika, kudanana shure 4000 makore. Regai kurasikirwa kana uine mukana!
No.1 for Celebrate Chinese New Yearmu Europe| Madrid, Speini
Nokuti rechitatu gore kumhanya, Spanish guta ndiyo nzvimbo Kupemberera Chinese New Year muEurope muna Spain, ane chirongwa zvetsika uye pamitambo wakarongwa ne Chinese Embassy. Concerts, okudhindira, mumigwagwa vaipemberera, uye gastronomic migwagwa will all be part of the festivities held in the Usera district – home of Madrid’s Chinatown.
Paris haasingori pamusoro kuti zvinhu vaipemberera uye imba yacho zvemaoresa kunyange. chakavanzika Its zvakanakisisa-vakaramba pamusoro nguva ino maviri netemberi echiBuddha riri muruwa rechi13. Pano mhuri China, Vhetinamu, uye Cambodia vanouya kubhadhara anoremekedza dzavo uye Hekanhi ari Goredzva. Nakidzwa kuratidzwa Chinese Arts and Crafts, kubika uye zvetsika kutamba uye mumhanzi. Ona guta vezviedza here zvinoenderana nezita raro iri nguva gore. Uye zvakanakisisa zvinhu zvaunogona chitima kufamba kubva Paris kuna Amsterdam uye kupembera vose mumaguta!
London England anodada pakuzvirumbidza kuti anobata nzira dzenyika kupfuura kupemberera Chinese New Year mu Europe, kunze Asia. saka, Chokwadi ichi ndechimwe kuti varove kana iwe Kupemberera Chinese New Year mu Europe.
guta rino chinobatanidza rimwe-zuva mutambo tsvikinyidza pamu mabasa kusanganisira zvokudya chinyakare, imwe paredhi pagore, zvesimba uye tsika ounyanzvi. (Waifanira nesu zvokudya chinyakare!) isu Count mu!
Pane zvinhu zvitatu chikuru muEngland iyo kuchengeta mitambo iyi; Trafalgar Square, Chinatown uye Shaftesbury Avenue. Mumwe nemamwe ari chaizvo mabasa uye zviitiko vavanopisira; vashanyi achava nesimba nguva kusarudza kuti kuita.
Chii yakanakisisa nzira Kupemberera Chinese New Year muEurope uye vasvike kune rimwe ramaguta awa? Nechitima, ehe saizvozvo! shandisa SaveATrain bhuku zvakanakisisa ngaakuitirei mumaminitsi!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine batanidzo kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/celebrate-chinese-new-year-europe/ – (Mupumburu pasi kuona Embed Code)